Myanmar Defence Weapons: ဟန်သာဖြစ်၍ အဆံမရှိသည့် သင်္ကြန်အမြောက်များ
Posted by MM at 5:58 PM
Falcon April 2, 2014 at 7:49 PM
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ...ရေဒါ ရှောင်ကွင်းနည်းပညာ သုံး တည် ဆောက်ထား တဲ့ စတဲ့လ်ဖရီးဂိတ်တွေ တစ်နှစ်ကို တစ်စင်းနှုန်း နဲ့ ရေချလိုက်... တပ်တော် ၀င်လိုက်လုပ် နေတာကို တောင် ကျွန်တော်တို့က နှေးပြီး နည်းနေသေးတယ် လို့ ထင်နေတာဗျ..။ ကျွန်တော်တို့ဆီက အသစ်ဝယ် မယ့် JH7တွေ ကို စီ ၈၀၂ သင်္ဘော ဖျက် ဒုံး တွေချိတ်ပြီး လွှတ်လိုက်မယ် ဆို ရင်.....ဂွတ်ရှယ် ဖြစ်သွား မယ်..ထင်တယ်နော်..။ မသိလို့မေးပါရစေ.... ဘရဲ့ မစ်ဂ် ၂၉ တွေက ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရေး လုပ်တာ မျိုး ဖြစ်လာ နိုင်လား ဗျ..။.. ဂျေအိတ်ခ်ျ ဆဲဗင်း တွေ က ဒေါ့ဖိုက်ရော ရလား .. ဒါမှမဟုတ်.... ဘေးက မစ်ဂ် တွေ က လိုက်စောင့် ပေးရသေးလား....... ။ ပြီးတော့ သူတို့ ဖရီးဂိတ်တွေမှာ ကလို့စ်အင် ၀က်ပွန် စစ် စတမ် ရော တပ်ထား လား ဗျ.......။ ပါမယ်ထင်တယ်နော်....။
ko phone April 3, 2014 at 9:14 AM
ဘလေတပ်မှာ MIG-29 (၈)စီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် စီးပွါးရေးအခြေအနေမကောင်းလို. ပြန်ရောင်းမယ်လို. အသံထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ပြီးတော့ သူတို.၀ယ်ထားတဲ့ MIG-29 (၈)စီးဟာ EW စနစ်တွေဘာတွေ မပါဘူး။ DATA Link system မပါဘူး။ အဲအတွက် မြန်တာပဲရှိမယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့် တိုက်ပွဲမ၀င်နိုင်ဘူး။
Aung Zaw April 2, 2014 at 9:21 PM
We need to increase our Naval power and Naval capabalities !
sithu April 3, 2014 at 3:53 AM
Kyawzaww tun April 3, 2014 at 6:55 AM
Mg Thi ha Aung April 4, 2014 at 2:06 AM
ကိုယ်ဘက်ကတော့ Perfect ဖြစ်နေရမယ်
zaw khine April 17, 2014 at 3:31 AM
ဘ ကကောင်တွေ ကတော့ ဘလောဂ့် တွေမှာ ဝင်ရေးနေတယ် f22 (ulsan class - Korea)တစ်စင်းထဲနဲ့တောင် မြန်မာ naval fleet တစ်ခုလုံးကို ချေမှုန်းနိုင်တယ်တဲ့ wikipedia မှာလည်း အဲဒီသင်္ဘော က regional မှာအကောင်းဆုံးတဲ့ ကိုMM ရေကြည့်လုပ်ကြပါဦးဗျာ
Mg Oo April 21, 2014 at 9:34 AM
​​ရေ​အောက်​မှာ ​မြေတူးပြီး ရန်​သူလာရင်​
နိုင်​ငံဘတ်​ဂျက်​များလာရင်​ စစ်​မူမထမ်းမ​နေရဥပ​ဒေပြဌာန်း​စေချင်​တယ်​ ဒါမှမျိုးဆက်​သစ်​လူ
koko chityinhtoo September 7, 2014 at 10:01 AM